Usoro AutoCAD - Geofumadas
Ihe mgbochi 12.1
Dika anyi kwurula, nkpuchi geometric guzobere nhazi nke geometric na nmekorita nke ihe banyere ndi ozo. Ka anyị lee nke ọ bụla: 12.1.1 Nke ndabichi Mgbochi a na-eme ka ihe ahọrọ ahọpụtara nke abụọ wee dabaa n'otu n'ime isi ya na isi ihe nke ihe izizi. Ka anyị na-agagharị onye na-ahọpụta ihe, Autocad gosipụtara ...
AutoCAD 2013 Agụmakwụkwọ, Usoro ọmụmụ n'efu
ISI NKE 12: NKWU ỤBỤRỤ PARAMETRIC
Mgbe anyị jiri akara ngwụcha ihe, ma ọ bụ etiti, dịka ọmụmaatụ, ihe anyị na-eme bụ ịmanye ihe ọhụrụ ahụ ịkekọrịta isi na jiometrị ya na ihe ọzọ dọtara. Ọ bụrụ na anyị ejiri ntụnyere "Parallel" ma ọ bụ "Perpendicular", otu ihe ahụ na - eme, anyị na - amanye nhazi geometric nke ihe ọhụrụ n’ihe gbasara ...
Ka anyị laghachi azụ na mkparịta ụka "Drawing Parameters". "Polar Tracking" taabụ na-enye gị ohere ịhazi atụmatụ nke otu aha ahụ. The "Polar Trace", dị ka "Object Snap Trace", na-emepụta akara ntụpọ, mana naanị mgbe cursor gafere akụkụ ahụ akọwapụtara, ma ọ bụ mgbakwunye ya, ma site na nhazi nke ...
ISI 10: ỊNỤTA NDỊ MGBE NA-ECHICHE NA-ECHICHE
"Object Snap Trace" bụ mgbatị bara uru nke atụmatụ "Object Snap" maka ịbịaru. Ọrụ ya bụ ịtọpụta usoro vector oge enwere ike ị nweta site na "Ihe Ntugharị" iji kaa akara ma nweta isi ihe ndị ọzọ n'oge mmebe nke ịbịaru iwu. Na ndị ọzọ okwu, mgbe ...
9.1 .X na .Y Dot Filters
Ntughari aka na ihe dika "Site na", "Midpoint n'etiti 2 isi" na "Mgbati" na-enyere anyị aka ịghọta otú Autocad nwere ike isi gosipụta isi okwu ndị na-adabaghị na jiometrị nke ihe ndị dị ugbu a mana enwere ike inweta ya, echiche nke ndị mmemme eji haputa ihe ozo eserese a na akpo "Point Filters" na ...
ISI 9: IJI AGBANWEE ECHICHE
Ọ bụ ezie na anyị enyochaworị usoro dị iche iche iji dọpụta ihe dị iche iche n'ụzọ ziri ezi, na omume, ka eserese anyị na-adịwanye mgbagwoju anya, a na -emepụta ihe ọhụrụ ma na-adịkarị na njikọ nke eserese. Nke ahụ bụ, ihe ndị dị adị na eserese anyị na-enye anyị nkọwapụta geometric maka ihe ọhụrụ ahụ. Na…
Ihe anyị ahụgoro ugbu a, anyị maara na "ịdọpụta" ahịrị na imepụta ihe ederede otu akara bụ ọrụ enwere ike ịme ngwa ngwa na ngwa ngwa na Autocad. N'ezie, ọ ga-abụ ihe niile achọrọ iji mepụta tebụl ngwa ngwa na ngwa ngwa, na ijikọta, dịka ọmụmaatụ, ahịrị ma ọ bụ polylines na ihe ederede ruo mgbe imepụta ...
N'ọtụtụ ọnọdụ, foto ndị ahụ anaghị achọ ihe karịrị otu okwu nkọwa. N'ụfọdụ, agbanyeghị, ihe edeturu dị mkpa nwere ike ịbụ paragraf abụọ ma ọ bụ karịa. Yabụ iji otu ederede ederede eme ihe ọ bụla. Kama anyi jiri ederede multiline. A na-arụ ọrụ a na ...
Styledị ederede bụ naanị nkọwapụta njirimara njirimara dị iche iche n'okpuru otu aha. Na Autocad anyị nwere ike ịmepụta ụdị niile anyị chọrọ na eserese wee nwee ike ijikọ ihe ederede ọ bụla na otu ụdị. Mmachi ike nke usoro a bụ na a na - echekwa ụdị dị iche iche ...
8.2 Na-edezi ederede ihe
Site na isi nke 16 gaa n'ihu, anyị na-emekọ isiokwu metụtara ịdezi ihe. Agbanyeghị, anyị ga-ahụ ebe a ngwaọrụ dị maka idezi ihe ederede nke anyị mepụtara kemgbe ọdịdị ha dị iche na nke ihe ndị ọzọ. Olee otú ọ ga-adị ...
Ogwe 8.1.1 na ederede
Ihe ederede nwere ike itinye ụkpụrụ ndị dabere na eserese ahụ. A na-akpọ njirimara a "Text Text" ma ha nwere uru na data ha na-eweta dabere na njirimara nke ihe ma ọ bụ akụkụ nke ha na-akpakọrịta, ya mere enwere ike imelite ha ma ọ bụrụ na ha agbanwee. Yabụ,…
8.1 Text na akara
N'ọtụtụ oge, nkọwa dị na eserese nwere otu okwu ma ọ bụ abụọ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na atụmatụ ụkpụrụ ụlọ, dịka ọmụmaatụ, okwu dịka "Kitchen" ma ọ bụ "North facade". N'ọnọdụ ndị dị otú a, ederede dị na ahịrị dị mfe ịmepụta ma chọta. Maka nke ahụ, anyị nwere ike iji iwu "Ederede" ma ọ bụ bọtịnụ ...
IHE 8: TEXT
Mgbe niile, ederede ga-agbakwunye na eserese niile nke ụlọ, injinia ma ọ bụ n'ibu. Ọ bụrụ na ọ bụ atụmatụ obodo, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbakwunye aha n'okporo ámá. Eserese nke igwe na-enwekarị ihe edetu maka ogbako ahụ ma a ga-enwe ndị ọzọ, ọbụlagodi, nwere aha ...
Dị ka ọ dị na ikpe ndị gara aga, anyị na-eji otu usoro iji gosipụta nghọta nke ihe: anyị na-ahọrọ ya wee setịpụ uru kwekọrọ na otu "Njirimara". Agbanyeghị, ekwesịrị ịdeba ama ebe a na uru nghọta enweghị ike ịbụ 100%, ebe ọ ga - eme ka ihe ahụ ghara ịhụ anya. Oke…
Line ọkpụrụkpụ bụ naanị na, obosara nke ihe si akara. Dịkwa ka ọ dị na ikpe ndị gara aga, anyị nwere ike igbanwe ọkpụrụkpụ ahịrị nke ihe nwere ndọtị ndepụta na otu "Njirimara" nke taabụ "Home". Anyị nwekwara igbe iji tọọ ntọala nke kwuru ...
7.2.1 Akwukwo nke ahiri
Agbanyeghị, ọ bụghị gbasara itinye ụdị ahịrị dị iche iche na ihe na-enweghị njirisi ọ bụla. N'ezie, dịka ị pụrụ isi hụ site na aha na nkọwapụta na windo "Linetype Manager", ọtụtụ ụdị ọrụ ahụ nwere ebumnuche doro anya doro anya na ...